Rolland RAVATOMANGA : « fotoana famondronan-kery izao » – MyDago.com aime Madagascar
Rolland RAVATOMANGA : « fotoana famondronan-kery izao »
Nisy ny fivoriana izay nataon’ny avy amin’ny Ankolafy Ravalomanana teto Antsirabe tao amin’ny Avana Hôtel ny harivan’ny zoma .Niresadresahana manokana ny mahakasika ny Ankolafy Ravalomanana ka nitarika izany resadresaka izany ny mpandrindra nasioanaly Guy Maxime sy Maître Hanitra ary ny minisitra Rolland RAVATOMANGA.
Nisy ny fametrahana fanontaniana teto izay tena nahaliana ny vahoaka tokoa satria dia nahafantarana zavatra maro mahakasika ny raharaham-pirenena
Ho an’ny Ankolafy Ravalomanana dia tsotra ny tanjona : mody Dada na misy fihaonana amin’ny Rajoelina na tsisy. Tsy izany no sakana tsy hampodiana an’i Dada hoy i Maître Hanitra fa efa natao ny fampodiana an’i Dada teto madagasikara efa in-droa izay ka inona no tsy hamerenantsika azy fanintelony izay fotoana tsy maintsy hodiany ary tsy hisy sakatsakana intsony tsy hanaiky izany intsony isika fa rehefa tonga ny fotoana hitsenana azy dia efa tokony samy vonona isika rehetra.
Nanamafy ihany koa ny minisitra Rolland RAVATOMANGA teto fa fotoana famondronana ny hery izao ka mila miara-mientana isika hamaranana ny tolona dia ny fampodiana an’i Dada izay hany lalan-tokana ivoahana amin’ny Krizy, tsy misy afa-tsy ny fodian’i dada ny antsika no tanjona ka na inon-kidona na inon-kihatra isika miroso foana.
Nisy ny hafatra nifametrahana teto dia ny fiarovana ny Orinasa TIKO sy ny fanatevenana ny tolona eny amin’ny Magro Avaratsena .
Senatera Ravatomanga Rolland : « ny Troika mihitsy no handray an-tanana ny fanelanelanana eto Madagasikara «
Auteur Solo Razafy*Publié le 15 juin 2012 15 juin 2012 Catégories Politique
4 réflexions sur « Rolland RAVATOMANGA : « fotoana famondronan-kery izao » »
Mitambatra ho azy anie ny hery rehefa tsy mande ny fiainan’ny malagasy e !
Aza matahotra re fa Andriamanitra eo an-tampon’ny loha jerena e !
Mafy be ireny teny navoakan’ny communauté internationale ireny. Izay tsy mamla ny ahantanterahan’ny tondrozotra dia ho faiziny – tsy ny fahatongavan’ny Ambassadeur ny Australia na ny Allemagne akory no inona fa milaza ireny hoe : Tanteraho ny tondrozotra Rajoelina raha tsy izany dia miala ianao. Izany no fahafantarako azy. Mbola fampierireretana farany ho an-dRajoelina izany, ka asa re !
Hanambatra ny hery ? herin’iza ? eo ny vondron’ny mpanohitra eo ny Samy leo, dia eo koa ireo anti-Rajoelina… Ka iza no hiaraha fa hatr@ izao tsy mazava ny kabary eny an-kianja toa lasa hoe Andriamanitra indray mantsy ilay resaka , mampiseho ny fahamatoranan-tsaina na tsia mihitsy izany.
Izao indrindra no fotoana tokona hanararaotana fa tsy sahy mikasika ny eo @ 13 mai ny EMMO-NAT fa hitan’ny SADC sady misahirana ny @ any atsimo. Ny fidinana an-dalambe miaraka daholo izao no tena atao alohan’ny 26 juin.
Milaza mantsy ny FAT fa milamina sy manaiky azy ny tany ary manatateraka ny tondrp zotra izy. Voafitany @ izany ohatra ny solo-tenan’ny Australie ka nanatitra taratrasy fanekana sy fahatongavan’ny masoivoho.
Tsy maintsy aseho @ izao tontolo izao fa hatr@ izao dia tsy mbola manaiky ny FAT sy Andry Rajoelina ny Malagasy
Ny fidinanana an-dalam-be dia tsara raha ialana daholo ny fifandonanana amin’ny miaramila(contourner-na).Asiana fandalovana eny amin’ny biraon’ny SADC mba hazava aminy tsara ny zavatra tadiavintsika.Marina fa tamin’ny 47 dia nifandona tamin’ny mpanjanaka ary tsy mitovy intsony ny fiadiana ampiasaina amin’izao fotoana izao.Ary izay koa no tadiavin’ny FAT ho faty tanteraka isika mianakavy dia an’azy irery ny solintany.
Fa mbola mamerina fa tokony hihetsika ny tafika legalista satria betsaka izy ireo.
18 juin 2012 à 18 h 19 min
Efa ela no tokony navondrona ny hery fa tsy vao izao ,tara be ianareo ,sa inona no tanjona?
Précédent Article précédent : NATAHOTRA NY SEMPAMA NY EMMO
Suivant Article suivant : TIKO Andranomanelatra : « tsy azo anaovana barofo »